War-bixin:- Tartan iyo Tacliin oo Daljir ka socda iyo Natiijooyinkii Tartamadii dugsiyada sare ee xalayto – Radio Daljir
Luulyo 18, 2013 5:01 b 0
Boosaaso, July 18- 2013 – Barnaamijka tartan iyo tacliin oo xalay galay habeenkiisii lixaad ayaa waxaa ku tartamay dugsiyada Xaaji Salaad Carmo iyo Imaamu Nawaawi Garowe , halka dugsiga shaafici uu si toos ah u qaatay dhibcihii, kadib markii qaybtii labaad ee barnaamijka ay kula tartami lahaayeen dugsiga Gambool uu ka baaqday? ka qaybgalka barnaamijkii xalay, sidaasina waxaa Shaafici Bosaaso uu ku helay sadex dhibcood.
Qaybta kale oo ay ku tartameen dugsiyada kala ah Xaaji salaad Carmo iyo Imaamu Nawaawi Garowe ayay guushu ku raacday dugsiga imaamu Nawaawi Garowe.
Maxamed C/laahi (Kaanuu) oo ka mid ah guddiga barnaamijka ayaa natiijada ku dhawaaqay, waxaana uu yiri” Dugsiga Xaaji Salaad Carmo waxaa la waydiiyay lix su’aalood ee tartanka uu ku lahaa waxaana uu ka jawaabay shan ka mid ah uu ku helay toban dhibcood, dugsiga Nawaawi Garoowe waxaa la waydiiyay lix su’aalood dhamaantood waxaa uu uga jawaabay sidii saxda ahayd sidaasina waxaa uu ku helay 12 dhibcood guushuna ay ku raacday.
Caawa waxaa tartamaya dugsiyada kala ah Cumar Samatar oo ka dhisan Gaalkacyo iyo C/laahi Ibraahim degmada Ufayn, halka sidoo kallena ay tartami doonaan sheekh Cusmaan Qardho iyo Cumar Binu Cabdulcasiis Bosaaaso.
Tartan iyo Tacliin waa? barnaamijka ugu wayn ee tartan aqooneed oo loo qabto ardayda waxka barata Puntland, waxaana barnaamijka dhinaca maaliyadda ka taageeraya Wasaaradda waxbarashada dowladda? Puntland, shirkaddaha? Golis,Salaama Bank, daladda waxbarshada PEN oo su’aalaha soo diyaarisa, waxaana barnaamijka sitoos ah uu uga baxaa xarumaha Daljir ee Geeska Afrika iyo idaacado gudaha ah sida Radio Sanaag oo xaruntiisu tahay degmada Baran.
Howgalka AMISOM oo shaaciyey in ay la wareegi doonaan meel kasta ay ka bexeen ciidanka Ethopia